I-chalet yangasese ene-sauna kunye ne-tub eshushu
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguChristian
Kubalulekile kuthi ukuba uzive ukhululekile kwi-chalet yethu, kuba siyisebenzisa nathi ngokwethu, ifakwe ngothando kwaye ihonjisiwe - njengoko unokubona kwiifoto. (Qaphela, ibhafu entsha eshushu iya kufumaneka ukusuka ngoJulayi 2021)
Ngaba ujonge ukuphumla, ukuzola, ukukhwela intaba kunye nokutyibilika kulonwabo lwakho kunye nabo ubathandayo?
Ke ukwindawo elungileyo kwindawo encinci kodwa entle yosapho lokutyibiliza kunye nendawo yokunyuka intaba iHochrindl.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, izitya, umatshini wekofu, itoaster, i-egg cooker, i-fondue kunye neseti yeraclette, njl.
Ibhafu eshushu kunye nesauna nazo ziyafumaneka.
Nceda uzise iitawuli zakho kunye nelinen yebhedi kwaye azifakwanga kwixabiso!
Izilwanyana zasekhaya kunye nokutshaya akuvumelekanga kwindawo yokuhlala.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, izitya, umatshini wekofu, itoaster, i-egg cooker, i-fondue kunye neseti ye-raclette, njl.
Iitawuli kunye nelinen yebhedi kufuneka ize nawe kwaye ayifakwanga kwixabiso!
Izilwanyana zasekhaya kunye nokutshaya kwindawo yokuhlala akuvumelekanga.
Kummandla okufutshane kukho imakethi encinci apho unokuthenga ii-rolls ezintsha kunye neemveliso zasekhaya kwisidlo sakusasa okanye i-snacks. Ukuba awufuni ukuziphekela, kukho intaphane yeendawo zokulala ezikufutshane apho ungazonwabisa ngokuzonwabisa kwakho kwiCulinary Slope (Zirbenlift) kunye ne-ski run run cross-country malunga ne-200 m kude ne-chalet. Ukuqala kwi-chalet kukho intaphane yeendlela zokuhamba kunye ne-adventure yabancinci nabadala.Ungazibona ezinye iindawo zohambo olunokwenzeka kwiphepha lasekhaya leKaerntencard,
ngokuqinisekileyo kukho into kuyo yonke incasa!
Kummandla okufutshane kukho imakethi encinci apho unokuthenga iiroli ezintsha kunye neemveliso zasekhaya kwisidlo sakusasa okanye i-snack. Ukuba awufuni ukupheka ngokwakho, kukwakho nentaphane yeendwendwe ezikufutshane, apho unokuzonwabisa ngokuzonwabisa. I-ski slope (Zirbenlift) kunye ne-cross-country ski run malunga ne-200 m kude ne-chalet. Ukuqala kwi-chalet kukho intaphane yeendlela zokuhamba kunye ne-adventure yabancinci nabadala. Ezinye iindawo ezinokufikela kuzo zinokufumaneka kwiphepha lasekhaya leKaerntencard,
Meine Familie und ich suchen immer wieder Erholung und Entspannung auf der Alm in unserem kleinen aber feinen Chalet auf der Hochrindl. Hier können wir richtig abschalten. Die Natur mit allen Sinnen genießen, sei es beim Schifahren und Langlaufen im Winter, oder ausgiebigen Wandertouren und etlichen anderen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Sommer. Probier es einfach aus und lass dich überraschen.........
Meine Familie und ich suchen immer wieder Erholung und Entspannung auf der Alm in unserem kleinen aber feinen Chalet auf der Hochrindl. Hier können wir richtig abschalten. Die Natu…
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sikhona ngefowuni (+436643487946), nge-imeyile (chscha80@gmail.com) kwaye, ukuba kuyimfuneko, ngokobuqu.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane nathi ngomnxeba (+436643487946), nge-imeyile (chscha80@gmail.com) kwaye ukuba kuyimfuneko nalapho ngokwakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo,…